Sida loo sameeyo xusuusta shaqada ee ku dhaqanka shirkadaha | Sameynta iyo daraasadaha
Sida loo sameeyo xusuusta shaqada ee ku dhaqanka shirkadaha
Maite Nicuesa | | Xarumaha tababarka
Ardaygu wuxuu helayaa waxbarasho joogto ah noloshiisa tacliimeed oo dhan. Xusuusta shaqada waa qoraal lagu soo bandhigayo isku-darka mashruuca la qabtay. Dabeecad ahaan, dukumiintigaan wuxuu leeyahay qiime aad u weyn iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecada baaritaanka ee ay leedahay marka ay ku jirto isku-dhafka a cilmiga doctoral ama a mashruuca shahaadada ugu dambeysa. Haddii aad isku aragto xaalad noocan ah, barahaaga ayaa kugula talin doona adiga shaqsi ahaan si aad u xalliso shaki kasta oo aad ka qabi karto warbixintan.
Si kastaba ha noqotee, xusuusta ayaa ah dukumiinti sidoo kale xoojineysa barashada ardaydaas oo dhammeystay tababar shaqo shirkadeed. Muddo tababar ah oo uu awood ugu yeeshay inuu si dhow u barto qaybtan xirfadeed. Xaaladdaas, dhamaadka muddadan sidoo kale waxaa lagu faahfaahiyey milicsiga ka muuqda dukumintigan. Sidee xasuus qor shaqo barasho ka dib markaad dhamaysato tababar shaqo?
1 Aqoonsiga ardayga
2 Masuuliyaadka masuulka ah ee ardayga
3 Macnaha guud ee dhaqanka
4 Liiska howlaha la qabtay iyo ujeeddooyinka la gaadhay
5 Fikrad shaqsiyeed
Dhaqanku had iyo jeer waxay leeyihiin dabeecad shaqsiyeed maadaama ardaygu yahay qofka shaqsiyan mudada tababarkan la socda a aragti khibrad leh. Xaaladdan oo kale, xogta aqoonsiga ardayga waa in lagu daraa, iyo sidoo kale tababbarkooda.
Masuuliyaadka masuulka ah ee ardayga
ka dhaqanka ganacsiga Waxay muujinayaan wadashaqeynta ka jirta qaybta jaamacadda iyo ganacsiga adduunka. Sidaa darteed, ardayga khibraddan ku nool wuxuu leeyahay laba umeerin oo kala duwan. Midna wuxuu ka shaqeeyaa shirkadda uu ka tirsan yahay midna wuxuu ka shaqeeyaa jaamacadda uu ka baranayo barnaamijka tacliinta.
Macnaha guud ee dhaqanka
Tusaale ahaan, waxaa muhiim ah in lagu macneeyo waqtiga loo qabtay waxa uu ahaa bilowgii iyo dhammaadki xilligan. Sidoo kale waa lama huraan in lagu koobo barashadan qaab tooska ah ee ardaygu u qabtay shaqadiisa.
Waa wax fiican in macnaha guud laga dhigo tan iyo intii qalabka iyo xirfadaha la helay ay xiriir cad la leeyihiin fursadaha deegaankaas.
Liiska howlaha la qabtay iyo ujeeddooyinka la gaadhay
Dhaqanku wuxuu kab u yahay tababarka teori, si kastaba ha noqotee, labada diyaaradoodba waa xiriir. Xusuustaan, a sharaxaadda howlaha Hawlaha ugu muhiimsan ee ardaygu ka soo maarey booskiisa, maaddaama hawlahani ay muujinayaan karti la soo bartay.
Waa xusuus, sidaa darteed, tani waa xusuusta kuwa joogtada ah ee muhiimka ah ee sharraxaya barashada xirfadeed ee halyeeyada. Laga bilaabo isla marka aad hawshan bilowdo illaa aad dhammaysato, waxaad la kulantaa isbeddel shakhsi ah. Aqoontaadu way ka qoto dheer tahay maalinta ugu dambeysa waxqabadka marka loo eego maalinta ugu horreysa ee la qabsiga. Sidaa darteed, waad qiimeyn kartaa yoolalka la gaadhay intii hawshani socotay.
Maxaad baratay? Ma liis garayn kartid oo keliya barashada farsamada, laakiin sidoo kale kartida kale ee shucuureed. Tusaale ahaan, wada shaqeyn kooxeed aad muhiim ugu ah shirkado badan.
Ka baxsan joogitaanka sharaxaadda ujeeddada hawlaha la qabtay inta lagu gudajiray muddadan tababarka, waxaad ku siin kartaa habeyn dheeraad ah adoo la wadaagaya qiimeyntaada.
Sida warqadda daboolku u tahay dhammaystir wanaagsan manhajka, si la mid ah, khadadkaas qiimeynta shaqsiyeed ee qayb ka ah xusuusta a shaqooyinka Waxay kuu oggolaanayaan inaad horumariso hal-abuurnimadaada adoo ku cabiraya milicsiga macquulka ah ee adiga macnaha kuugu leh qaab dhismeedka la taaban karo ee waayo-aragnimadan.
Haddii ay tahay inaad qorto xusuusta waxqabadku u maleyso inay dukumintigani yahay dhammaadka cutub ka mid ah muddada noloshaada. Waqti u hel himiladan, ka taxaddar muujinta qaab ahaan iyo nuxur ahaanba, kuna raaxayso waayo-aragnimadan kuu oggolaanaysa inaad kula xiriiraan taariikh nololeedkaaga xirfad-yaqaaneed.
Tani waxay kuu noqon doontaa xusuus aad waligaa xajisid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Xarumaha tababarka » Sida loo sameeyo xusuusta shaqada ee ku dhaqanka shirkadaha
Waa maxay xusuusta nidaamka?
Sidee loo noqon karaa tusaale? 7 talo si loo gaaro hadafkan